I-Carbon Fibre Indwangu Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Carbon Fibre Indwangu Factory
Indwangu yeSiliva Carbon Fibre enokuqukethwe kwekhabhoni engaphezulu kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization.Ubuningi bayo bungaphansi kwe-1/4 yensimbi ngenkathi amandla eyizikhathi ezingama-20 uma iyinsimbi.Ayiqukethe kuphela izinto zekhabhoni kepha futhi inokusebenza, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
Ithebhu yeCarbon Fibre
Ithebhu yeCarbon Fibre enokuqukethwe kwekhabhoni ngenhla kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization.Ubuningi bayo bungaphansi kwe-1/4 yensimbi ngenkathi amandla eyizikhathi ezingama-20 uma iyinsimbi.Ayiqukethe kuphela izici zekhabhoni kepha futhi inokusebenza, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
Indwangu yeCarbon Fibre Indwangu enokuqukethwe kwekhabhoni ngaphezu kwe-95% okususelwe ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization.Ubuningi bayo bungaphansi kwe-1/4 yensimbi ngenkathi amandla ephindwe izikhathi ezingama-20 uma eyinsimbi. kepha futhi inokusebenza, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
Indwangu eluhlaza ye-Carbon Fibre enokuqukethwe kwekhabhoni engaphezulu kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization. kepha futhi inokusebenza, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
I-Satin Weave Carbon Fibre enokuqukethwe kwekhabhoni engaphezulu kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization.Ubuningi bayo bungaphansi kwe-1/4 yensimbi ngenkathi amandla eyizikhathi ezingama-20 uma iyinsimbi. kepha futhi inokusebenziseka, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
Indwangu ye-Honeycomb Carbon Fibre Inani elinokuqukethwe kwekhabhoni elingaphezulu kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization.Ubuningi bayo bungaphansi kwe-1/4 yensimbi ngenkathi amandla eyizikhathi ezingama-20 uma iyinsimbi. material kepha futhi inokusebenziseka, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
Intengo ye-Carbon Fibre Intengo enokuqukethwe kwekhabhoni engaphezulu kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization.Ubuningi bayo bungaphansi kwe-1/4 yensimbi ngenkathi amandla eyizikhathi ezingama-20 uma iyinsimbi.Ayiqukethe kuphela izici zekhabhoni kepha futhi inokusebenza, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
ICarbon Fibre 4k enokuqukethwe kwekhabhoni okungaphezulu kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization.Ubuningi bayo bungaphansi kwe-1/4 yensimbi ngenkathi amandla eyizikhathi ezingama-20 uma iyinsimbi.Ayiqukethe izici zekhabhoni kuphela futhi inokusebenza, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
I-2 × 2 Carbon Fibre
I-2x2 Carbon Fibre iyikhebula elikhethekile elinokuqukethwe kwekhabhoni elingaphezulu kwama-95% okususelwa ku-PAN kukhiqizwa nge-pre-oxidation, i-carbonization kanye ne-graphitization. okwenziwe ngekhabhoni kepha futhi kunokusebenziseka, ukuguquguquka kwemicu yendwangu.
Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu i-fiberglass, Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized,